नियात्रा : गोठीकाँडा डाँडादेखि काँक्रेबिहारसम्म - साहित्य सङ्ग्रहालयसाहित्य सङ्ग्रहालय
← लघुकथा : अठारौँ बाख्रो
कविता : खल्लिवल्लि →
‘अनि कत्रो छ बजार क्षेत्र ?’ मलाई अभैm खसखस बढ्यो । खसखस थाम्न नसक्ने मान्छे म । फेरि प्रश्न गरेँ,— ‘बजार क्षेत्र कत्तिको पैmलिएको छ ? सानो क्षेत्रमा सिमित छ कि ! अलिक ठूलै छ ?’
सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा सरकारी, तर नकच्चरिएर आश्रय लिन मिल्ने सार्वजनिक जस्तै सन्यासी आश्रम छ अहिलेसम्म मेरो । यही पनि सुकुम्बासीका छाप्रा भत्किएभैmँ कतिखेर भत्किन्छ वा हट्छ थाहाछैन । कार्यालयको उपस्थिति र हैसियत पनि करिब–करिब त्यस्तै छ । उमेर पुगेर पनि बिवाह नगरी माइतै बसेकी चेलीको जस्तो । नवागन्तुक भएर हो कि के हो थाहा छैन । अलिक कताकता नअटाए जस्तो । व्यक्त वा अव्यक्त रुपमा यो भन्दा खासै भित्र छैन यतिखेरको मेरो उपस्थिति र हैसियत । खानपान र अन्य रहनसहन पनि यस्तै सेरोफेरोमा नाचिरहेछ । लादिएको शासन व्यवस्था जस्तो । जे पनि सकार्नु पर्ने वाध्यता । खुकुरीको मार अचानोले भोग्नु पर्छ, अरुलाई त्यसको पीडा र मर्म के थाहा ? हो, यतिखेर म यस्तै अनुभूतिमा नाचिरहेछु । हाँसिरहेछु । हँसाइले कसैको अकल्याण हुँदैन । हाँस्नुमा पुरुषार्थ छ । हाँस्नुमा गौरव छ । जिन्दगी हाँस्नैका लागि हो । यही मान्यतामा जगत चल्नु पर्छ । चल्छ ।
यसै गरी टहलिने क्रममा मलाई सुर्खेत छिरेको दुईचार दिनपछि पूर्णमानजीले गोठीकाँडाका विषयमा बताउनु भएको थियो । त्यस ठाउँका विषयमा सुनेपछि र टाढैबाट त्यस क्षेत्रको भौगोलिक अवस्थितिको आकलन गरेपछि मलाई त्यहाँ जाऊँजाऊँ लागिरहेथ्यो । मेरा मनमा पलपल के कौतूहल बढ्न थाल्यो भने,— ‘सुन्दर सुर्खेतको यो मनोरम प्राकृतिक हरियाली वातावरण गोठीकाँडा डाँडाबाट चियाउँदा अभैm कस्तो देखिन्छ होला ? कति मनोहारी हुन्छ होला त्यो दृश्य ? सुर्खेतको आकर्षण बुलबुले ताल, गङ्गामाला देउती बज्यै मन्दिर, काँक्रेबिहार र वरिपरिका लाटीकोइली, उत्तरगङ्गा लगायत अरु सुन्दर मानवबस्ती कस्ता देखिन्छन् होला त्यहाँबाट ? सुर्खेत सदरमुकामको मात्र के कुरा ! गोठीकाँडा डाँडाबाट देखिने त्यस उताका उत्तरी क्षेत्र कस्ता होलान् ? त्यस डाँडामा उभिएर हेर्दा पक्कै पनि समग्र नेपालको चित्र आउँछ होला आँखामा । त्यहाँ पुग्न पाए डाँडाका डिलबाट हिमाल, पहाड र तराईका दृश्य पनि कैद गर्न सकिन्छन् होला यी मसिना आँखामा ?’ यिनै कौतूहल, यिनै जिज्ञासा र यिनै तिर्सनाले मलाई पलपल पिरोल्न थाल्यो । सुर्खेतको बसाइ लामै हुने भएकाले तत्काल त्यस्तो हतार भने केही थिएन । तैपनि गोठीकाँडाका विषयमा सुनिसकेपछि आजभन्दा भोलि, भोलिभन्दा पर्सि सुर्खेत उपत्यका नजिकै हरहमेशा ठिङ्ग उभिइरहेको उसले ‘म कहाँ कहिले आउँछस् त ?’ भनेर बेलाबेलामा खिस्सी गरेभैmँ गरी मैलाई जिस्क्याउन थाल्यो । गोठीकाँडा मेरा लागि केटाकेटीको दशैँका लुगाभैmँ पलपल विशेष चाहको विषय बत्र थाल्यो ।
शरद् ऋृतु शुभारम्भको पहिलो साता । ठ्याक्कै असोज ७ गते, २०६८ साल । सरसल्लाह मिल्यो एक महिना अघिदेखि तलतलमा तैरिरहेको गोठीकाँडाको यात्रामा जाने । जसोतसो त्यहाँसम्म जान सक्ने गाडीको व्यवस्था पनि जुट्यो । जिल्ला निर्वाचन अधिकारी तिलक रिजाललाई गरेको आग्रह पछिका लागि सारेर हामी अर्कै गाडीको व्यवस्थामा अगाडि बढ्यौँ । लोक सेवा आयोग मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालयका प्रमुख विष्णुहरि पौडेल पनि हाम्रो विशेष आग्रहलाई स्वीकार गर्दै यस यात्रामा सहभागी हुन राजी हुनु भयो । मुलुकमा चलिरहेको गोप्य सहमतिको लहरको सिको गरेर पूर्णमान श्रेष्ठ, रामकृष्ण अधिकारी र म बीच दुईचार दिनअघि नै त्यहाँ जाने विषयमा गोप्य सहमति भइसकेको थियो । पछि सहकर्मी शर्मा मित्र द्वय रविलाल र टिकारामलाई पनि समेट्न पाए यात्रा अभैm रोमाञ्चक र अर्थपूर्ण हुन सक्छ भत्रे निष्कर्ष हामीले निकाल्यौँ । फोनबाटै आमन्त्रण ग¥यौँ यात्राका लागि । अन्तिम समयको तयारी र आमन्त्रण । टिकारामजी काम विशेषले जान पाउनु भएन । त्यही खबर आयो । रविलालजी तयार हुनु भयो । गाडी चालक क्रिमलाल चौधरीको गाडी हँकाइमा हामी सबै दिनको बाह्रतीस बजेतिर सुर्खेतको कपासे हुँदै हानियौँ सुर्खेतकै शिर गोठीकाँडातिर ।
पछि बुझ्दै जाँदा वैद्यको डाँडोदेखि जुकेपानी, कटकुवासम्मका सबै क्षेत्र नयाँ वृक्षरोपण गरिएको क्षेत्र रहेछ । २०२८ सालमा सुर्खेतमा नगर विकास योजना लागू भएपछि यस क्षेत्रको सबै बस्ती हटाएर नयाँ वृक्षरोपण र वन क्षेत्र संरक्षण गरिएको रहेछ । अहिलेसम्म पनि वैद्यको डाँडो भनेपछि पुराना मान्छे सबैलाई पुरानै कुराको याद आउने रहेछ । झट्ट हेर्दा सबैतिरका जङ्गलमा यस्तै बोट बिरुवा त हुन्छन् नि भने जस्तो लागे पनि यहाँको जङ्गलको अवस्थिति र हरियाली अलिक भित्रै छ । हेरुँहेरुँ लाग्ने जस्तो वातावरण र परिवेश । वास्तवमा सुर्खेतको शोभा बढाउनमा यिनको निकै ठूलो भूमिका छ । सुर्खेतको शिरमा निकै सुहाएको छ यो ।
हिउँदका अनुकूल मौसममा यहाँ बाँके, बर्दिया र यदाकदा कैलालीदेखि पनि बनभोज खानेहरु आउँदा रहेछन् । यो अत्यन्त राम्रो पक्ष हो । यी र यस्तै गतिविधिलाई बढावा हुने गरी काम गर्न गराउन सके यसको भविष्य उज्ज्वल देखिन्छ । तालभित्रको क्षेत्रमा वृक्षरोपण, पार्क निर्माण, नर्सरी लगायतका विभित्र कार्यको थालनी गरिए पनि यहाँभित्र गर्नु पर्ने धेरै कुराहरु गर्न बाँकी देखिन्छन् । यसको संरक्षण र सम्बद्र्धनका लागि सुरुसुरुमा जुन रुपमा जागरुकता देखाइएको थियो, अहिले त्यो पनि सेलाएको बुझियो । त्यहाँभित्र व्यक्ति विशेषले पसललगायत कुनै न कुनै बहानामा प्रयोग गरिरहेका घरटहरालाई बाहिर हटाएर त्यहाँ उपलब्ध भइरहेको पानीको उचित व्यवस्थापन, सरसफाई र अन्य कुरामा चासो दिएर काम गर्ने हो भने यस तालले सुर्खेतलाई दीर्घकालसम्म जीवन्त राख्न मद्दत पु¥याउने पक्का छ । यसो हुन सक्यो भने त्यहाँ भित्र पस्दा छुट्टै संसारको अनुभूति मिल्ने वातावरण सिर्जना हुन सक्छ । होइन भने ‘सुर्खेत बुलबुल ताल …’ भनेर गाइएको गीत गीतमै सिमित हुन्छ, अरु केही हुत्र ।
काँक्रेविहार सुर्खेतको अर्को एउटा पुरातात्विक महत्व बोकेको गहना हो । यसलाई राम्रोसँग स्याहारसुसार र संरक्षण गरी उपयोग गर्न सके यसले सुर्खेतको शोभा बढाउन सक्ने कुरामा कुनै शङ्का गर्नु पर्दैन । उपत्यकाको बीच भागमा अवस्थित लगभग १६७ हेक्टरभन्दा अझ केही बढी जमिनमा पैmलिएको सुन्दर हरियालीयुक्त सालसल्लोको जङ्गल र जङ्गलका बीचको सर्वाधिक उच्च स्थानमा रहेको काँक्रेविहारको भग्नावशेषले यसलाई अझ बढी आकर्षक बनाएको छ । यसका विषयमा थप खोजबिन र जानकारी जुटाउन खोज्दा २०२९ सालपूर्व यसको महत्ता र संरक्षणमा त्यति ध्यान दिइएको पाइएन । बरु चारैतिरबाट अतिक्रमणको मार र अपहेलनाको भार खेप्न प¥यो यसले । २०२९ सालमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको यस क्षेत्रमा भ्रमण भएपश्चात् यसको संरक्षण र संबद्र्धनमा चासो दिन थालिएछ । पुरातात्विक महत्वको यस स्थानमा अहिले पछिल्लो समयमा आएर पुरातत्व विभागबाट उत्खनन र निर्माणको काम पनि सुरु भएको छ । मोटामोटी छ÷सात सय वर्ष अगाडि निर्माण भएको अनुमान गरिएको यो विहार के कुन समयमा ध्वस्त भयो भत्रे आधिकारिक अभिलेख अहिलेसम्म जुटेको पाइएन । तर प्राकृतिक वा अन्य कुनै किसिमबाट विहार ध्वस्त भएको र त्यसमा प्रयोग भएका अनुपम कारिगरीयुक्त विशाल शीलाहरु यत्रतत्र सर्वत्र छरपस्ट भएको दृश्य अहिले पनि देख्न पाइन्छ ।
विहार निर्माणमा प्रयोग भएका ती सबै शीला पुरातत्वविद्हरुको अगुवाईमा बटुलबाटुल र सङ्कलन गरी पुनःनिर्माणका लागि नम्बरिङ गरिएको र पुनःनिर्माणको काम सुरु भएको छ । उपलब्ध शीलाहरुमा उच्च कारिगरीय सीप देख्न सकिन्छ । यो देखाइले काँक्रेविहारको क्षतविक्षत दृश्यले विरक्तिएको मन केही शान्त हुन्छ । उपलब्ध शीलाहरुको अवलोकन र बुद्ध मूर्तिको प्राप्तिले यो भगवान बुद्धसँग या अझ भनूँ बुद्ध धर्मसँग सम्बन्धित छ भत्र हिच्किचाउनु पर्ने देखिँदैन । अहिलेसम्मको अनुसन्धान र अवलोकनले त्यही बोल्छन् । झन्डझन्डैै साठी÷पैँसठ्ठी फिट भन्दा अग्लो अनुमान गरिएको यो विहारको पुनःनिर्माण पूरा हुन अभैm लामो समय लाग्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । पुनःनिर्माण सम्पत्र भइसकेपछि यसको ख्याति यति बढ्नेछ कि दर्शनार्थीहरुको चाप यहाँ ह्वात्तै बढ्नेछ, जसलाई बेलैमा आवश्यक तयारीसाथ व्यवस्थित गर्न सके सुर्खेतको मुहार परिवर्तनमा उपयोग गर्न सकिन्छ सक्छ ।
कुनै पनि कुरामा सकारात्मक सोचका साथ हुने छलफल, बहस र जागरुकताले नयाँनयाँ सम्भावनाको खोजी गर्छ । सुर्खेत सभ्भावनै सम्भावना समेटिएको सँगालो हो । यहाँ एकदुईवटा औँलामा गत्र सकिने मात्र होइन अरु प्रशस्त सभ्भावना छन् । ती सबै सम्भावनाको ढोका खुलाउने काम यहाँका स्थानीयको हो । स्थानीय चासो र जागरुकताबिना यी ढोका खुल्दैनन् । ढोका खुलाउने काम अपरिहार्य छ । ‘भाग्यमा छ भन्दैमा डोकामा दूध दुहेर अडिदैँन’ भत्रे आहान यतिखेर यहाँ उल्लेख गर्नु सायद सान्दर्भिक नै हुन्छ । आमाको दूधमा पूर्ण अधिकार राख्ने काखको बच्चाले त नरोईकन आफ्नी आमाको दूध चुस्न पाउँदैन भने अरुका के कुरा ? यस कुरालाई यहाँका स्थानीयले बेलैमा बुझ्नु पर्छ । घच्घच्याउनु पर्ने ठाउँमा घच्घच्याउनु पर्छ । एकजुट हुनु पर्ने ठाउँमा एकजुट हुनुपर्छ । अनि मात्र यो सम्भावनाको अर्थ रहन्छ । सकारात्मक प्रतिफल निस्कन्छ ।
(स्रोत : समकालीन साहित्य डट कम)
This entry was posted in नियात्रा and tagged Basudev Guragain, Pindaalu Pandit. Bookmark the permalink.